Lottery.com သည်ထီလက်မှတ် ၀ ယ်ခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်ခေတ်နောက်ကျသည်ဟုယုံကြည်မှုအပေါ်အခြေခံသည်။ အင်တာနက်ပေါ်မှမည်သည့်အရာကိုမဆို ၀ ယ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ထီလက်မှတ်တွေမဟုတ်လော ထို့အပြင်အစဉ်အလာစက္ကူလက်မှတ်လက်မှတ်ဖြစ်စဉ်ကိုမဆိုလုံခြုံရေးရှိသည်။ ၎င်းသည်“ Finders Keepers” ဂိမ်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အနိုင်ရသောလက်မှတ်ပျောက်ပြီးအခြားသူတစ် ဦး ကရှာတွေ့ပါကလက်မှတ်နှင့်ဆုသည်ရှာဖွေသူနှင့်သက်ဆိုင်ပြီးသင့်အနေဖြင့်သင်၏ပိုင်ဆိုင်ရာဖြစ်သင့်သည့်အရာအားပြောဆိုရန်မလိုပါ။ ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းရှိရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Lottery.com ကိုတည်ဆောက်ပြီးစီးသည်။ သင်တစ် ဦး ရိုးရာလက်လီအရောင်းဆိုင်မှာလက်မှတ်ဝယ်လျှင်, ဖြစ်စဉ်ကိုအဲဒီမှာအဆုံးသတ်ထားသည်။ လက်လီအရောင်းဆိုင်များကကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့်သင်၏လက်မှတ်ကိုအကာအကွယ်မပေးနိုင်ပါ။ အနိုင်ရသူဖြစ်ပါကသင့်အားအလိုအလျောက်အသိပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်ဆုများသည်အမှန်တကယ်လက်ငင်းဖြစ်ခဲ့လျှင်ကောင်းလိမ့်မည်မဟုတ်လော။ Lottery.com သည်ထိုအရာအားလုံးကိုသင့်အတွက်ဖြေရှင်းရန်အလုပ်လုပ်သည်။ သင်၏ဖုန်းမှလက်မှတ်များကို ၀ ယ်ယူရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ခွင့်ပြုပါသည်။ ထို့နောက်သင့်ကိုယ်စားလက်မှတ်များကို ၀ ယ်ယူပြီးလုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းထားပါ။ သင်အနိုင်ရသူဖြစ်ပါကသင့်အားအကြောင်းကြားပြီးဒေါ်လာ ၆၀၀ ကျော်သောမည်သည့်အနိုင်ငွေအတွက်မဆိုတောင်းဆိုမှုလုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်သင့်အားကူညီပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်ဆုသည်ဒေါ်လာ ၅၉၉ အထိရရှိပါကသင်၏ Lottery.com အကောင့်သို့ငွေပေးချေမှုကိုချက်ချင်းခံစားနိုင်သည်။ သင်၏လက်မှတ်ကိုကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးရန် (သို့) ငွေရရန်လက်လီရောင်းသူသို့ပြန်ရန်မလိုပါ - ကျွန်ုပ်တို့ကသင့်အတွက်ထိုအရာကိုပြုလုပ်ပေးသည်။
သင်၏မေးခွန်းများသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်သီးသန့်ဖောက်သည်ပျော်ရွှင်မှုအဖွဲ့ရှိသည်။ သင်၏နံပါတ်များကိုစစ်ဆေးခြင်း (သို့) သင်၏လက်မှတ်ပျောက်ဆုံးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင် ထပ်၍ စိတ်ပူစရာမလိုတော့သည့်အတွက်သင်သင်၏အနိုင်ရရှိသည့်ရာခိုင်နှုန်းကိုမည်သည့်အခါမှယူမည်မဟုတ်ပါ။
ဘယ်လိုမျိုး Lottery.com အလုပ်လုပ်?
ကျနော်တို့လက်မှတ်အပြည့်အစုံစီမံခန့်ခွဲမှုဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ကြသည်။ အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပြီးတာနဲ့ Powerball နဲ့ Mega Millions တို့လိုအကြိုက်ဆုံးဂိမ်းတွေအတွက် 100% စစ်မှန်သောထီလက်မှတ်များကိုမှာယူရန် app ကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်၏ကံကောင်းသောနံပါတ်များကိုဖွင့်ပါ၊ Lottery.com မှ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး သည်သင်၏ကိုယ်စားလက်မှတ်များကို ၀ ယ်ယူလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုသင်၏အက်ပ်တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီးတင်းကြပ်သောလမ်းညွှန်ချက်များအောက်တွင်ကာကွယ်လိမ့်မည်။ သင်၏လက်မှတ်သည် ၁၀၀% လုံခြုံမှုရှိကြောင်းသိပြီးကောင်းစွာအိပ်ပါ။ မဲချခြင်းပြီးတာနဲ့မင်းရဲ့လက်မှတ်တွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးမင်းကအနိုင်ရသူကိုမင်းကိုအသိပေးလိမ့်မယ်။ မင်းတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေဖြစ်ပျက်လာတဲ့အခါမင်းဂုဏ်ပြုသင့်တယ်။ ငါတို့က ၅၉၉ အထိဆုတွေအတွက်သင့်အကောင့်ထဲကိုချက်ချင်းပေးချေမှုကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့လက်မှတ်တွေထပ် ၀ ယ်ဖို့သုံးနိုင်တယ်။ သင်က BIG အနိုင်ရသူဖြစ်လျှင်တောင်းဆိုမှုများနှင့်ရွေးနှုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်။ ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိပါက Lottery.com ကိုယ်စားလှယ်သည်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးအတွင်းသင့်နောက်ကျောကို စ၍ အစပြုသည် (နှင့်၎င်းသည်သင့်အတွက်ကြီးမားသောအနိုင်ရရှိမှုဖြင့်အဆုံးသတ်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်!)
ထီကစားခွင့်ကိုခွင့်ပြုသည့်ပြည်နယ် ၄၅ ခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့“ အသက်မရှင်ရသေး” သော်လည်းအရာခပ်သိမ်းအတွက်တစ်နေရာတည်း၌ဆိုင်ဖွင့်ခြင်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ လက်ရှိနှင့်သမိုင်းဝင်အနိုင်ရနံပါတ်များအပါအ ၀ င်သင်အကြိုက်ဆုံးပြည်နယ်ဂိမ်းအားလုံးအကြောင်းချက်ချင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုကြည့်ရှုပါ အက်ပ်အတွင်း၌ရက်စွဲများ၊ ထီပေါက်နိုင်သည့်အရွယ်အစားနှင့်အခြားအရာများကိုဆွဲပါ။
အက်ပ်အတွင်းမှသင်ဝယ်ယူထားသောလက်မှတ်များသည် အကယ်၍ သင်သည်ဂိမ်းဆွဲပြီးနောက်အနိုင်ရသူဖြစ်ပါကသင့်အားအလိုအလျောက်သတိပေးလိမ့်မည်။ ကခုန်ဂီတကိုပြ။
အကယ်၍ သင်သည်ကြီးမားသောဂျီကော့တုတ်ကြီးကိုထိမှန်ရန်ကံကောင်းပါကကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်သွယ်၍ သင့်အားရွေးနှုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဆင့်သင့်အားကူညီပေးပါမည်။ ၎င်းတွင်ဒေါ်လာ ၆၀၀ ကျော်အနိုင်ရရှိသူများအတွက်အခွန်ပေးဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ငန်းစဉ်၏အဆင့်တိုင်းကိုလျှောက်လှမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေပြီးဖြစ်စဉ်အတွင်းရှိသင်၏ privacy ကိုကျွန်ုပ်တို့ကာကွယ်လိမ့်မည်။ အနိုင်ရစိတ်ဖိစီးမှုမဟုတ်, ပျော်စရာဖြစ်သင့်သည်!
ကျွန်ုပ်သည် app မှတဆင့်ကစားသောအခါ Lottery.com သည်ကျွန်ုပ်ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်မှတ်ပို့ပေးပါသလား။
မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်သင့်ထံအီးမေးလ်လက်ခံရရှိပါမည်။ Lottery.com သည်သင် app ကိုဖွင့်သောအခါသင်အတွက်သင်၏ထီလက်မှတ်၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုစီမံပေးသည်၊ သို့သော်သင်က၎င်းကိုပိုင်ရှင်အမြဲတမ်းရှိနေသည်။ သင့်အတွက်နံပါတ်များကိုစစ်ဆေးပြီးအနိုင်ရပါကသင့်အားအကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။ သင်၏ဆုငွေသည်သင်၏အကောင့်တွင်အကြွေးအဖြစ်ရှိနေလိမ့်မည်၊ သို့မဟုတ်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုငွေထုတ်ယူနိုင်ပြီးသင်၏အနိုင်ငွေ ၁၀၀% ကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့လက်မှတ်တွေရဲ့လုံခြုံရေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးဖြစ်ပါတယ်။ Lottery.com သည်သင်၏လက်မှတ်များကိုလုံခြုံစိတ်ချစေရုံသာမကသင်၏လုံခြုံမှုကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ထိန်းသိမ်းထားသည်။ သင်၏လက်မှတ်များကို ၂၄ နာရီကင်မရာဖြင့်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပြီးလုံခြုံမှုအမြင့်ဆုံးရရှိစေရန်မဲချပြီးနောက်အထိမဲချခြင်းများပြုလုပ်သည်။ ရိုးရာလက်လီအရောင်းဆိုင်များမှ ၀ ယ်ထားသောလက်မှတ်များနှင့်မတူသည်မှာသင်၏ Lottery.com လက်မှတ်သည်အခြားသူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏ဆုံးရှုံးမှု၊ ပျက်စီးခြင်း၊
သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကာကွယ်ပေးပါသည်။ သင်၏ငွေပေးချေခြင်း / ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များသည်အပြည့်အဝစာဝှက်ပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များ၏လုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန်ထိပ်တန်း third-party ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည်။
Lottery.com အက်ပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြု၍ လက်မှတ်များကိုမည်သူရထိုက်သနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံပေါင်း ၁၃၀ ကျော်နှင့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များတွင်အသက် ၁၈ နှစ်နှင့်အထက်ဖောက်သည်များကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန် ၀ မ်းသာပါသည်။ အသက် ၁၈ နှစ်အောက်ရှိသူများအားလက်မှတ်ဝယ်ယူခြင်းကိုဥပဒေအရတားမြစ်ထားသည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်သင်ထီတွင်မပါ ၀ င်သောပြည်နယ်တစ်ခုတွင်ရှိနေပါကသင်လက်မှတ်များကိုမှာယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်သည် US ရှိပါက MasterCard သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်းမှသင်၏အကောင့်ကိုငွေထောက်ပံ့နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံတကာကစားသမားများသည် Visa နှင့် Mastercard ဖြင့်ငွေပေးချေနိုင်သည်။
ထို့အပြင် Lottery.com မှတဆင့် ၀ ယ်ခဲ့သောအတိတ်လက်မှတ်များမှသင်၏ဆုငွေသည်သင်၏လက်မှတ်တွင်အကြွေးအဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သင်နောင်အနာဂတ်လက်မှတ်များ ၀ ယ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်အချိန်မရွေးငွေထုတ်ချေးနိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်, လက်မှတ်ဝယ်ယူမှုသရေကျနှုန်း 50 လက်မှတ်တွေကန့်သတ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တာ ၀ န်ရှိသောကစားနည်းများကိုပံ့ပိုးပေးပြီး၎င်းတို့ကစားသည့်ပမာဏကိုကန့်သတ်ရန်ဆန္ဒရှိသူများကိုအသိပေးခြင်းနှင့်ကူညီခြင်းဖြင့်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သောကစားသမားများကိုကာကွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကတိက ၀ တ်ပြုသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ငါတို့ဖတ်ပါ တာဝန်ရှိဂိမ်းပေါ်လစီ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်။
Lottery.com သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသင်၏ခွင့်ပြုချက်မရပဲမည်သည့်အခါကမှဖော်ထုတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်၊ သင်ထီထီပေါက်အနိုင်ရလျှင်အုပ်ချုပ်ရေးထီအဖွဲ့၏လိုအပ်ချက်များသည်အကျုံးဝင်သည်။ စိတ်မပူပါနဲ့ - သင်ကြီးကြီးမားမားအနိုင်ရမယ်ဆိုရင်မင်းကိုကူညီပေးလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူ၏အနိုင်ရရှိမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ဘယ်တော့မှမယူပါ။ သင် Lottery.com အသုံးပြု၍ ကစားသောအခါသင်၏အနိုင်ရရှိငွေ၏ ၁၀၀% ကိုသင်သိမ်းထားမည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှု၏အဆင်ပြေချောမွေ့မှုအမျိုးမျိုးအတွက်သင့်ကိုငွေပေးချေမှုကာလအတွင်းသင်မြင်ရမယ့်ငွေပေးချေမှုအတွက်အခကြေးငွေအနည်းငယ်ကျသင့်သည်။
အနိုင်ရရှိသူကိုထိန်းချုပ်မှု Lottery.com နိုင်သလား?
Nope ။ Lottery.com သည်လက်မှတ်စီမံခန့်ခွဲမှု ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုသည်တရား ၀ င်ထီလက်မှတ်များရရန်၊ သင်၏အနိုင်ရရှိမှုအကြောင်းကြားရန်နှင့်ထိုနိုင်ငွေကိုချက်ချင်းထုတ်ယူရန်အဆင်ပြေသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏လက်လီအရောင်းဆိုင်တစ်ခုတွင်သင်၏လက်မှတ်များကို ၀ ယ်ယူသောအခါကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထီဂိမ်း၏အလေးသာမှုသို့မဟုတ်အနိုင်ရရှိသူများကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ်ရရှိသောစက္ကူလက်မှတ်ကို Lottery.com အက်ပလီကေးရှင်းမှရယူနိုင်ပါသလား။
မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင် Lottery.com မှတစ်ဆင့်သင်ဝယ်ယူထားသောလက်မှတ်များကိုသာသင့်အားကူညီပေးနိုင်သည်။ သင်ဝယ်ယူထားသောစက္ကူလက်မှတ်ကိုသင်သိမ်းထားပြီးသေချာအောင်လုပ်ပါ။ သင်၏လက်မှတ်ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်းသို့မဟုတ်အခြားသူတစ် ဦး ကပြောဆိုခြင်းခံရလျှင်သင်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှပါ။ Lottery.com သည်ဤပြissuesနာများကိုဖယ်ရှားရန်ကူညီခြင်းဖြစ်သည်။ သင်အက်ပ်မှတဆင့်သင်ဝယ်ယူထားသောမည်သည့်လက်မှတ်ကမဆိုသင့်အတွက် ၁၀၀% ဖြစ်ပြီးဘယ်တော့မျှပျောက်ဆုံးခြင်း၊
ငါ့မှာ iOS ကိရိယာမရှိဘူး။ Lottery.com ကိုကျွန်တော်ဆဲနိုင်သေးလား။
သင်လုပ်နိုင်သည်မှာသေချာသည် play.lottery.com အကောင့်တစ်ခုဖွင့ ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးထီဂိမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဗားရှင်းတွင်စတင်ရန်။
ဟုတ်ကဲ့! နိုင်ငံပေါင်း ၁၃၀ ကျော်မှသုံးစွဲသူများအားအစစ်အမှန် Powerball ကစားရန်ကူညီသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံတကာ ၀ ယ်ယူမှုများအတွက်ငွေပေးချေမှုအဖြစ် Visa နှင့် Mastercard ကိုလက်ခံပါသည်။
သင်၏လုံခြုံရေးနှင့်သင်၏လက်မှတ်လက်မှတ်များ၏လုံခြုံမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အရေးကြီးသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ကျနော်တို့အကောင့်ဖန်တီးမှုများအတွက်အတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြenfor္ဌာန်းရန်။ သင်ဟာသင်နှင့်လူသားတစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်းသင်အတည်ပြုရန်သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်သင်နှင့်သင်၏လက်မှတ်များအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသောကာကွယ်မှုကိုသေချာစေသည်။
ကျွန်ုပ်သည်အက်ပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏အကောင့်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများရှိပါကမည်သူဆက်သွယ်ရမည်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Customer Happiness အဖွဲ့ရှိရင်းနှီးဖော်ရွေသူများကိုအလုပ်ချိန်အတွင်းရနိုင်သည်။ ကူညီရန် ၀ မ်းသာပါသည်။ သူတို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ခြင်းဖြင့်သင်ဆက်သွယ်နိုင်သည် support@lottery.com။ ယေဘူယျမေးမြန်းစုံစမ်းလိုလျှင်၊ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ဝဘ်တင်ပြမှုမှတဆင့်။